Safaaradda Soomaaliya ee Yemen oo UNHCR kala hadashay qaxootiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Safaaradda Soomaaliya ee Yemen oo UNHCR kala hadashay qaxootiga
28th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Cadan, Yemen: Gunsulka guud ee dawladda Federaalka ah Soomaaliya u fadhiya magaalada Caden ee dalka Yemen Axmed Cabdi Xassan (Axmed Suudaan) ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa cusub ee Xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Qaxootiga ee magaalada Caden Mrs, Ita Schuette.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo quseeya qaxootiga Soomaaliyeed gaar ahaan sidii uu mas`uulka cusubi gacan uga gaysan lahaa qaabka ugu fudud ee dib u celin loogu samayan lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee danaynaya inay dalkooda dib ugu noqdaan.
Ugu horayntii qunsulka guud Axmed Suudaan ayaa Mrs, Ita Schuette uga mahadceliyey booqashadeeda ay ku timid qunsuliyadda Guud ee Caden , iyo sida ay u danaynayso inay madaxda soomaaliyeed warbixin ka siiso wax qabadka xaafiiska UNHCR ee Caden iyo hawlaha baaxada leh ee u qorshaysan inay fuliyaan sanadka 2015 ayna ugu horayso arimaha dib u celinta qaxootiga iyo dardar galinta adeegayada ay u baahan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed eek u nool xerada Al-kharaz iyo dhamaan gobolada koofureed ee dalka Yemen .. sidoo kale qunsulka ayaa uga mahadceliyey dawlada yemen iyo madaxda xafiiska qaramada mideebey ee qaxootiga sida goor walba ay ugu taagan yihiin gargaar u fidinta iyo xanaanaynta qaxootiga soomaaliyeed kuwaas oo ku dhawaad dhowr iyo 20 sanno ku noolaa dalka ayemen.
Kulanka ayaa looga hadlay sidii hayqada UNHCR iyo Dawlada Soomaaliya isaga kaashan lahaayeen fulinta codsiyada qaxootiga Soomaaliyeed ee ay ku doonayaan in dib u celin loo sameeyo ,. Mrs Ita ayaa sheegtay inay wada hadal u socdo iyaga iyo xafiiska UNHCR ee Muqdisho Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya arimaha dib u celinta iyo qaabka ugu fudud ee qaxootiga yemen ka noqonaya loo gaynlahaa deegaamadii ay horay uga soo barakaceen ee nabdoon . waxayna tilmaantay mrs Ita in arintaas ay meel fiican marayso lana qaaday dhamaan talaabooyinkii loobaahnaa lagana yaabo in bartamaha sanaka 2015 ay bilaaban doonto fulinta qorshahaas iyadoo tilmaantay inay si dhow ula socdaan xaalada amni ee soo hagaagaysa ee wadanka Soomaaliya.
Sidoo kale qunsulka ayaa kala hadlay Mas`uulka qaramada midoobay ee arimaha qaxootiga sidii xal loogu heli lahaa ilmaha soomaaliyeed ee soo gaara dalka yemen iyaga oon waalidkoodu la socon kuwaas oo ay hay`adda Inter SOS ay noloshooda gacanta ku hayso iyo baahida ay u qaban ubadkas inay dib ugu noqdaan gacan waalidiintooda , arintaas oo u baahan dadaal wada jir ah si loogu gulaysto heilda waalidiinta ubadkaas. sidoo kale waxaa kulanka lagu gorfeeyey dhibaatooyin ka ka taagan bixinta kaararka qaxootiga iyo cusboonaysiintooda , iyo hagaajinta arimaha asaasiga u ah qaxootiga ku nool xerada qaxootiga ee Al-kharaz sida Quudka , Caafimaadka iyo waxbarashada. Sidii kale waxaa kulanka looga wada hadlay sidii taageero dhaqaale loogu heli lahaa arada qaxootiga ee ka faaidaysta deeqaha waxbarasho ee dawalada soomaaliyeed ay ka hesho dawladda Yemen sanad walba lana kulma dhibaatooyin dhaqaalo xumo oo keena inay iskaga tagaan waxbarashada jaamacadaha.
Mrs, Ita ayaa qunsulka u cadaysay inay booqashadeedu ay qayb tahay xog aruurin iyo inay warbxin ka dhaqaysato qunsulka guud ee cadan arimaha la xariira qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan gobolada koofureed ee dalka yemen iyo sidii ay qunsuliyadu iyo hay`adoodu isaga kaashan lahaayeen xalinta wixii dhibaatooyin ah ee ka jira xerada qaxootiga . iyadoo dhanka kale ka mahad celisay soo dhawaynta fiican ee ay kala kulantay qunsulka guud ee cadan axmed suudaan.
Ugu dambayntii qunsulka ayaa ka codsaday mas`uulkan in xil gaara iska saarto sidii looga jawaabi lahaa cosdisyada qaxootiga loona hagaajin lahaa noloshooda , isagoo cadeeyey in dawlada soomaaliya ay gacan wayn ka gaysan doonto arimaha dib u celinta qaxootiga iyo inuu si dhaw ula shaqayndoonaan madaxda hay`adda UNHCR iyo dawlada yemen arimaha ku aadan daryeelka qaxootiga soomaaaliyeed eek u nool dalka Yemen iyo dib u celintoodaba.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ka ahaa madaxa Protection Office ee UNHCR Mr daved iyo Arman iyo sidoo kale xoghaya sadexaad ee qunsuliyadda Maxamed Cumar.